MADAXDA SOOMALIDU WAXEEY CAYDAA AQLIGA RAACIYAHOODA: – Aminawehelie.me
May 29, 2014 May 19, 2017 by aminawehelie
Aflagaado laguugula kaco ma ahan oo qur ah tan sida tooska ah laguu yiraahdo, laakiin waa noocyo badan tahay.
Cayda, af-xumada iyo aflagaadada waxaa dhici karta in aanu u naqaan oo qur ah, tan laguula qasdo oo laguugu yiraah: WAXAAS, WAXAAS IYO WAXAAS BAAD TAHAY, balse sidaas oo kali ah ma ahan.
Afgaadada waxaa loo geysan kara cid kasta si toos ah, si dadban ama si durranba ahba ha ku timaadee, balse tan aan hadda cinwaankeeygaan uga dan leeyahay, waa tan masuuliyiinteenu ama dadka sheegta in eey siyaasiyan inna xukumaan ama ha noqdeen kuwo aanu dooranay (Maba doorane) ama ha noqdeen kuwo naloo dooray, ama ha noqcdeen xoog ama xeelad inagu qabsada amaba ma ha noqdeen kuwo danu keentayba, ay inoo geysaan, maxaa ka mid ah marka, inaguse ma ku baraarugsan nahay in madaxdeenu inna af-lagaadeyso?
aan ku hor maro tan dambe, u maleyn maayo in aan ku bararugsan nahay waayoo umaba naqaan noocaasi in uu aflagaado yahay.
In MASKAXIYAN lagu afgalaadeeyo waa ka culus tahay in MACAWIYAN laguu caayo, waa maxay sababtu?
Marka MACNAWIYAN laguu caayoo waxaa la caayayaa uun dharkaaga, jirkaaga, muqaalkaaga, hadalkaaga, qaabkaaga, midabkaaga IWM
Laakiin marka laguu aflagaadeeyo MASKAXIYAN, waxaa la caayayaa aqligaaga, bini’aadanimadaada, jir iyo jar isla socda, waxaa la caayayaa jiritaankaga qof aheeneed, waxaana lagaa soo qadaayaa qof aan waxba ahayn, waxba diidi karin, waxba dooni karin, waxba badali karin, taasaana ugu darran adigana ku gaarsiineysa dhaawac aan laga soo waaqsan.
Hadaba masuuliyiinta Soomalidu waxey dadka ay sheegteen in eey xukmaan u caayaan si MASKAXIYAN AH, oo sidee u caayaan? maxaase cadeynaya in eey iina caayaan?
1. Marka wixii aad ka fileysay iyo waxey ballanqadeen in eey qabanayaan ay ka soo bixi waayaan, adiguna aad ku aamusto wajib-gudasho la’aantooda weey kuu cayeen ee ogoow.
2. Marka xillalka kuugu dhiibaan kuwo aan dooc iyo duunba garaneynin oo qabyaallad lagu soo xulay adiguna kaaga dhigaan in eey sidaasi dani kuugu jirto maadama ay ilma adeeradaa yihiin doqomahaan ay kuu direen, adiguna aad sidaas raali ku noqoto uguna riyaaqdo, weey ku caayeene ogoow.
3. Marka wixii yaraa wadanku tuugsi iyo taagsiba ku helay ay iyagu jeebkooda ku shubtaan, misna malinta xigta aad aragto kii shalayto aan waxba ku dhaamin oo daaro dhaadheer ka dhistay dalal kale iyo kiiniiba, danna aneey ka gelin baahiddada shacab ahaan, iskuul la’aanta caruurtaada, biyo la’aanta xaafaddaada, isbitaal la’aanta degmadaada, iyo daryeel la’aanta gobolkaaga, iyadana waa ku cayeene ogoow.
4. Marka intaas aan kor ku sheegay ay kugula kacaan, hadana raaligein ka bixin kari waayaan qaladaadkooda maalinlaha ah, weliba isku dayaan in eey xukunka dheereystaan (Taasoo marmar badan dhacda) iyadana waa ku cayeene ogoow.
5. Marka aad hoostooda kuc adaalad beesho, la iska daa dilo, la iska kaa dhaco, la iska kaa kufsado, laguugu dur-duriyo sidii la doonana lagaa yeelo, misna aad sidaas raali isaga ahaato, iyadana waa ku caayeene ogoow.
6. Markii ay dastuuradeey qoreen ku dhaqmi waayaan, ixtiraami waayaan, marka dambana ay ku gaarsiiyaan jahawareer jir iyo laf ah sida ay u baal marayaan sharuucda caalamiga ah, tan wadaniga ah iyo tan dastuuriyanka ahba, adiguna aad sidaas hebed isaga ahaato, iyadana waa ku caayeene ogoow.
7. Markii kuwii shalayto ku dilay, ku baabi’iyey, ku dhacay hortaada ku abaalmariyaan darajooyin waaweyn adiguna aad juuq ka oran weydana waa ku caayeene ogoow.
Intaas aan soo hadal qaaday iyo ka badanba waa inna heysataa, maalin kastana waa inna cayaan si MASKAXIYAN ah, umana dareenno in eey inna caayayaane waa nala toosan yihiin, waanu tageernaa si kastaba, hadalkoodaa jira, waana la kala safannaa sidii ineey janno na geynayaan, waxaana nahay masaakiintii la caayey misna aan ogeyn in la caayey, oo sidaas ku caayan.
Sida qur ah oo caydaas naloo qasday aan uga bixi karnaana waa, in aan u garanaa teegeeradda dhimir la’aanta ah ee qayalaadeed, qolo-qoleed iyo qol-qoleed oo annu la garab taaganahay in aan ka tansulno, una soo jeesano sidaan kuwa ina caayaya misna sheeganaya in ay inna xukumaan ugu sheegi lahayn runta, isbadelna u dalban lahay innagoo isku duuban, rasaasna waxba ku raadin.
Previous MARTI-QAADKII CEEBTA (Qeybta-1aad)
Next HADDII JACEYLKA LA WAAYO